အိပ္ယာအသုံးအေဆာင္ေတြ မၾကာခဏေလၽွာ္ဖို႔ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးတာလဲ..? by popolay.com
11 Jun 2019 10,786 Views
ကိုယ်ညစဉ်အိပ်နေတဲ့ အိပ်ယာဆိုတာ ကိုယ့်အတွက်တော့ နိဗ္ဗာန်ဘုံလေးပါပဲ။ အဲဒီနေရာလေးမှာ တစ်နေ့လုံး ပင်ပန်းလာသမျှ လဲလျောင်းအပမ်းဖြေ အိမ်စက်လိုက်ရတဲ့ အရသာက ဘာနဲ့မှတောင် လဲနိုင်မယ်မထင်ပါဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေ ခရီးထွက်လို့ အခြားနေရာတစ်ခုမှ နှစ်ည သုံးညလောက် အိပ်ရရင်တောင် ကိုယ့်အိမ်က အိပ်ယာလေးကို ပြန်သတိရမိတတ်ပါတယ်။
ဟုတ်ပါပြီ.. ဒါဆိုရင် ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ယာလေးကိုရော မကြာခဏ သန့်ရှင်းရေး လုပ်ဖြစ်ကြပါရဲ့လား..?
အိပ်ယာသန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ အချိန်ကာလကို တိတိကျကျပြဌါန်းသတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် တစ်ပတ်တစ်ကြိမ် သန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးတာက အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။
ညဆိုရင် ပုံမှန်ဝင်အိပ်တတ်ပေမယ့် အိပ်ယာအသုံးအဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်၊ ဖက်လုံးစွပ်၊ စောင်နဲ့ အိပ်ယာခင်းတွေကို သန့်ရှင်းရေးလုပ်ပြီး လျှော်ဖွတ်ဖို့ မေ့နေတတ်တာက ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။
အိပ်ယာဟာ ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်က ထွက်လာတဲ့ အညစ်အကြေးတွေဖြစ်တဲ့ ချွေး၊ အဆီ၊ မိတ်ကပ် နဲ့ တစ်ခါးတစ်ရံ သွားရည်တွေပါ ပေကျံလူးနေပါတယ်။ ဒီလိုအညစ်အကြေးတွေ စိမ့်ဝင်နေတဲ့ အိပ်ယာကို ပုံမှန်သန့်ရှင်း မလုပ်ပေးဖူးဆိုရင် အသားအရေ ယားယံတာ၊ အသက်ရှုလမ်းကြောင်း ပြသနာနဲ့၊ မှိုစွဲတဲ့ ပြသနာတွေကြောင့် နေထိုင်မကောင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အိပ်ယာပေါ်မှာ အမှုန်အမွှားပေါင်း များစွာရှိပြီး အဲဒါတွေကြောင့် နှာစေးတာ၊ မျက်လုံးယားယံတာ၊ နှာချေတာနဲ့ အခြားမအီမသာဖြစ်တာတွေကြောင့် ညဘက် ကောင်းကောင်းအိပ်မပျော်တာတွေ ဖြစ်စေပါတယ်။
အိပ်ယာအသုံးအဆောင်တွေကို လျှော်ဖို့ဆိုရင်တော့ မလျှော်မီ ခေါင်းအုံးစွပ်၊ ဖက်လုံးစွပ်၊ စောင်နဲ့ အိပ်ယာခင်း စတာတွေကို ပိုးသေအောင် အပူချိန် ၅၀ ဒီဂရီ အနိမ့်ဆုံးရှိတဲ့ ရေနွေးပူပူနဲ့ အနည်းဆုံး ၁၀ မိနစ်နဲ့အထက် စိမ်ထားပါ။ အဲဒီနောက်မှ အဝတ်လျှော်စက်နဲ့ဖြစ်စေ လက်နဲ့ဖြစ်စေ ဆပ်ပြာမှုန့်နဲ့ စိမ်ပြီး လျှော်ဖွတ်ပါ။
တတ်နိုင်ရင် မွေ့ယာတွေကို ဖုန်းစုပ်စက်နဲ့ စုပ်ပါ၊ ဒါမှ မွေ့ယာမှာ ကပ်နေတဲ့ ဖုန်းတွေ ဆံချည်မျှင်တွေအားလုံး သန့်ရှင်းသွားပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ရဲ့ အိပ်ယာ ဘယ်လောက်ထွ ညစ်ပတ်နေပြီလဲဆိုတာ ဖုန်းစုပ်ထာတဲ့ ပမာဏကို ခန့်မှန်းကြည့်နိုင်ပါတယ်။
လျှော်ဖွတ်ပြီးသား အိပ်ယာအသုံးအဆောင်တွေ ခြောက်သွေ့သွားပါက တိုက်ရိုက်ပြန်ပြီး အသုံးပြုတာထက် ဖြစ်နိုင်ရင် မီးပူတိုက်ပြီး ပြန်သုံးဖို့ အကြံပြုပါတယ်။ အခုလို အသစ်ပြန်လည် သန့်ရှင်းထားပီးသား အိပ်ယာပေါ်မှာ အိပ်ရတဲ့အရသာဟာ ဘယ်လောက်တောင် ဇိမ်ကျသလဲဆိုတာ သင့်ကို ကိုယ်တိုင်ခံစားစေချင်ပါတယ်။